RASMI: CONMEBOL oo go’aan rasmi ah ka soo saaray racfaankii xiriirka kubadda cagta Argentina ay ka qaateen ganaaxii Messi – Gool FM
RASMI: CONMEBOL oo go’aan rasmi ah ka soo saaray racfaankii xiriirka kubadda cagta Argentina ay ka qaateen ganaaxii Messi
(Ameerika) 02 Okt 2019. Xiriirka Kubadda Cagta South America ee CONMEBOL ayaa go’aan rasmi ah ka soo saaray racfaankii ay ka qaateen xiriirka kubadda cagta Argentina ganaaxii Messi.
Xiriirka Kubadda Cagta South America ee (CONMEBOL) ayaa diiday racfaanka ay ka soo gudbiyeen xiriirka kubadda cagta ee dalka Argentina ganaaxa la dul dhigay Lionel Messi, kaddib hadaladii muranka dhaliyay uu ka sheegay xiddiga kooxda Barcelona tartankii Copa America 2019.
Ganaaxan la dul dhigay Messi ayaa wuxuu daba socdaa markii uu ku sheegay in xiriirka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika uu yahay mid musuqmaasuq ah, kaddib tartankii Copa America 2019 ee ka dhacay dalka Brazil, isaga oo tilmaamay inay koobka u hadiyadeeyeen xulka Samba.
Xiriirka Kubadda Cagta ee dalka Argentine ayaa u gudbiyay (CONMEBOL) codsi ah in la fududeeyo ganaaxa seddexda bilood ah ee la dul dhigay Lionel Messi iyo lacagaha $ 50,000 oo qeyb ka ah ganaaxa, kaasoo ka bilaaban doono bisha August.
Laakiin Xiriirka Kubadda Cagta South America ee (CONMEBOL) ayaa jawaab rasmi ay ka soo bixiyeen raacfaankan waxay ku xaqiijiyeen sida ay xaq u tahay in Messi uu maro ganaaxa la dul dhigay.
Messi ayaa seegi doona kulamada ay Argentina la ciyaari doonto xulalka Germany iyo Ecuador, waxaana la filayaa inuu soo laabto si uu u matalo dalkiisa bisha November haddii xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay.
Klopp oo wali xasuusta soo laabashadii taariikhiga aheyd ay kooxdiisa Liverpool ku hor sameysay Barcelona